Rwanda oo hoy u noqonaysa qaxootiga Afrika iyo Soomaali ka mid noqotay | HalQaran.com
Rwanda oo hoy u noqonaysa qaxootiga Afrika iyo Soomaali ka mid noqotay
Qoyska Soomaalida ee laga keenay Liibiya iyagoo wata canuga ugu da’da yar ee la geeyay Rwanda
Kigali (Halqaran.com) – Sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay ilaa 66 qof oo qaxooti Afrikaan ah oo ku xannibnaa Liibiya ayaa loo daad gureeyay magaalada Kigali ee xarunta dalka Ruwaandha.
Dejinta qaxootiga ay ka heleen Ruwaandha ayaa ka dambeysay kaddib ballanqaad uu Madaxweyne Paul Kagame sameeyey sanadii 2017, kaas oo uu ku yaboohay in uu dalkiisu hoy siinayo dadka Afrikaanka ah ee ku dhibaateysan Liibiya.
Horraantii bishan, Ruwaandha ayaa heshiis la saxiixatay Midowga Afrika iyo Hay’adda Qaxootiha QM ee UNHCR, iyada oo oggolaatay inay qaabisho qaxootiga iyo dadka magan-galyo doonka Afrikaanka ah ee ku xanniban Liibiya.
Ruwaandha ayaa sheegtay inay isu diyaarisay inay qaabisho ilaa 30,000 oo qof, inkasta oo qorshuhu yahay in markiiba dib u dejin loo sameeyo 500 oo qof.
Qofka ugu da’da yaraa qaxootiga gaaray Kigali ayaa ah gabar yar oo jirta kaliya 2 bilood oo ay dhaleen muwadiniin Soomaali ah.
Dadka la geeyay Kigali ayaa la dajin doonaa xarunta qaxootiga ee ku-meel gaarka ah ee Gashora oo ku taalla degmada Bugesera oo qiyaastii 60 KM u jirta magaalada Kigali.
Madaxweyne Kagame ayaa markii ugu horreysay yaboohay inuu qaato Afrikaanta ku xanniban Liibiya, kaddib markii warbixin uu diyaariyey taleefishinka CNN ay muujisay wax u muuqday suuq addoonsi oo halkaas ku yaalla.
Qaramada Midoobay ayaa shaacisay in qiyaastii 42,000 oo ah qaxooti u badan Afrikaan ay iminka ku sugan yihiin Liibiya.
la geeyay Rwanda
Soomaali laga keenay Liibiya